mairie-antananarivo – Fanadiovana teny amin’ny Gare Routière Ampasampito
Fanadiovana teny amin’ny Gare Routière Ampasampito
auteur 11 aprily 2017 Commentaires fermés
Nanatanteraka fanadiovana teny amin’ny Gare Routière Ampasampito ny Boriborintany fahadimy ny 07 Aprily 2017. Niaranisalahy tamin’ny asa ireo ekipa teknika sy ny « Direction Technique et de la Mobilité Urbaine » avy ao amin’ny fiadidina ny Kaominina.
Notapahana ireo lobolobo sy bozaka tao amin’ny parking, nohesorina ireo mpivarotra hanimasaka tafiditra ao anatin’ny toeram- piantsonana, nalamina ny toerana fiantsonan’ny fiara arakarakin’ ny koperativa isantsokajiny.Lehibe sy midadasika ity toerana ity satria misy parking roa karazana, ao ambony no fifamezivezen’ireo fiara mpitatitra efa vonona ny hanainga ary ao ambany kosa fiandrasan’ireo fiara miandry laharana.
Notohizana tamin’ny fivoriana niarahana tamin’ireo Lehiben’ny Koperativa ny hetsika. Vinavina ny hamindrana ireo fiara mpitatitra mampitohy an’Anjepy sy Mantasoa ao amin’ny parking ambany.
Tanjona nandritra izao hetsika izao ny handamina sy hampalalaka ny fifamoivozana eny amin’ny lalampirenena faharoa.Nomena fanentanana ireo mpitatitra sy mpandeha niampy ireo mpanao varomandeha ny amin’ny tokony hikajiana ny fanadiovana sy hitandroana ny filaminana.
Nilaza ihany koa ny “Chef de centre” sy ny Lehiben’ny Koperativa fa anisan’ny milamina ny toeram-piantsonana eny Ampasampito ka tafiditra amin’izany ny fandriampahalemana. Misy ny olona efa voatendry manokana amin’izany ary samy manana “badge” avokoa ireo mpiasa rehetra eny, etsy andaniny dia misy ireo “bagagiste” izay miandraikitra ny fibatana ny entan’ireo mpandeha mba hisorohana izay mety ho fahaverezan’ny entana.
Araka ny nambaran’ny Lehiben’ny Boriboritany faha dimy RAKOTO Emmanuel Richard dia asa maharitra izao hetsika izao ka mila fiarahamientan’ny rehetra. Mbola hisy ny fifampiresahana sy fandaminana hiarahana amin’ ireo mpivarotra sakafo. Ho jerena manokana ny toerana hametrahana azy ireo satria efa asa fivelomany ny fivarotana eny amin’ity toeram- piantsonana ity. Fantatra fa mbola hisy ny fanavaozana ho entin’ny Kaominina momba izany toerana izany.